होल्डि What्गहरू के हुन्: दरहरू र तिनीहरूलाई तपाईंको दिन दिन गणना गर्न कसरी | अर्थव्यवस्था वित्त
एनकर्नी आर्कोया | 30/05/2021 12:14 | अद्यावधिक गरियो 30/05/2021 12:18 | सामान्य अर्थव्यवस्था
एक अवधारणा मध्ये एक हो कि दिन प्रति दिन सब भन्दा बढी प्रभाव गर्छ रोकि हो। यी रकमहरू हुन् जुन करदाताले तिर्ने ट्याक्सहरूमा अग्रिमको रूपमा प्रविष्ट गर्न घटाउँछन्। तर, रोकिनु भनेको के हो? त्यहाँ धेरै प्रकारका छन्?
अर्को हामी तपाईंसँग रोकावटको अवधारणा, अवस्थित प्रकारहरू र केहि विशिष्ट प्रकारका बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौं जुन तपाईंले यस अवधारणाको बारेमा ध्यान राख्नु पर्छ।
1 के रोकिन्छ?
2 रोकावटको महत्त्व
3 कसरी रोक लगाइएको गणना गरिन्छ
4 तिनीहरू कहिले लागू हुन्छन्
5 रोकावटको प्रकार
5.1 भाडाका लागि
5.2 व्यावसायिक धारणा
यदि हामी कर एजेन्सीमा भर पर्दछौं भने यसले रोकावटलाई परिभाषित गर्दछ "निश्चित आयको दाताले करदाताबाट घटाएको रकम, जुन कानूनमा स्थापित छ, कर प्रशासनले करदातालाई तिर्नु पर्ने करको" अग्रिम "को रूपमा कर प्रशासनमा प्रवेश गर्नको लागि यसलाई कानूनमा स्थापित गरिएको छ।"
रोकावटहरू प्रशासनिक अदालतको प्रावधानको रूपमा बुझ्नुपर्दछ जुन करहरूको अग्रिम तिर्न भविष्यमा (छोटो, मध्यम वा दीर्घ अवधि) तपाईंले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ कि करहरूको अग्रिम भुक्तानी गर्न एक व्यक्तिको आम्दानी वा आयको निश्चित रकम रोक्न सक्दछ।
उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाई स्वयं रोजगारदाता हुनुहुन्छ र तपाईले एक ग्राहकलाई चलानी पठाउनु पर्छ। यसले भ्याट मात्र ल्याउँदैन, बरु व्यक्तिगत आयकर पनि घटाइनेछ। घटाइएको त्यो रकम हो जुन राज्यमा एक अग्रिमको रूपमा प्रविष्ट गरिएको छ, क्वाटरमा, भुक्तानी भइरहेको छ (र त्यसैले जब समय आउँछ, यसले त्यो रकमलाई घटाउनुपर्दछ जुन पहिले नै भुक्तान गरिसकिएको छ)।
अन्य शब्दहरुमा, हामी एक निश्चित रकमको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन एक वेतन, एक चलानी वा अन्तमा, आर्थिक धारणा जसको उद्देश्य करको एक हिस्सा तिर्नु हो प्रतिबन्धित छ त्यो, समयको अवधिमा, तपाईंले भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ।
धेरै व्यक्ति र पेशेवरहरू सचेत छन् कि उनीहरूले आफ्नो चलानीहरूमा रोक्का लगाउनु पर्छ र त्यसकारण उनीहरूले अपेक्षा गरेको रकम प्राप्त गर्दैनन्, तर धेरै कम। तर सत्य यो हो कि यो धेरै कारणहरूको लागि रोकावटहरू गर्नु महत्त्वपूर्ण छ:
किनभने तिनीहरू कर धोखाधडीबाट बच्छन्। अगाडि करको एक अंश भुक्तान गरेर, राज्यले सुनिश्चित गरिरहेको छ कि व्यक्तिले उनीहरूको करहरू दर्ता गरे, अन्यथा उनीहरूले पैसा गुमाउन सक्छन्। उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईले चलानी गर्नुभयो र तपाईले १०० यूरो भुक्तान गर्नुभयो। तर पहिले तपाईंले 100 युरो कर भुक्तानी गर्नुभयो। ठिक छ, यदि तपाईं यो प्रस्तुत गर्नुहुन्न भने, तपाईं फरक ती 200 यूरो गुमाउन हुनेछ।
किनभने यसले राज्यको तरलता सुधार गर्दछ। यसलाई ध्यानमा राख्नु अपरिहार्य छ। राज्यले आफ्ना नागरिकहरूबाट पैसा प्राप्त गर्दछ र यसले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न भुक्तान गर्न सक्षम गर्दछ। यदि तपाईंले सबैलाई भुक्तानी गर्न पर्खनु पर्‍यो भने तपाईंसँग "काम" जारी राख्न पैसा हुने छैन जसले तपाईंलाई loansणको सहारा लिन बाध्य पार्छ।
कसरी रोक लगाइएको गणना गरिन्छ
रोक लगाउन गणना गर्न धेरै सजिलो छ। एकचोटि तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले कति घटाउनुपर्दछ, तपाईंले केवल आधार के हो भनेर मात्र जान्नुपर्दछ, त्यो हो, पैसा जुन तपाईं रोकी होल्डिंग लागू गर्नु पर्छ।
उदाहरणको लागि, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंसँग १०० यूरोको बिल छ र तपाईंले व्यक्तिगत आयकर हटाउनु पर्छ। यो राशि जुन तपाईंले हटाउनुपर्नेछ राज्य द्वारा परिभाषित गरिएको छ र सामान्य रूपमा प्रत्येक वर्ष उही हो। यस अवस्थामा, हामी १ 100% को बारेमा कुरा गर्दैछौं (त्यहाँ केसमा आधारित अपवाद छन्, तर सामान्यतया यो फिगर हो)।
यसको मतलब यो छ कि १%% 15 युरोबाट हटाउनुपर्नेछ। अर्को शब्दमा:
१०० युरोको १%% १ 15 यूरो हो। १०० - १eयूरो बराबर 100 15 यूरो हो। त्यो तपाइँले वास्तवमा प्राप्त गर्नुहुनेछ किनभने अन्य १ 100 यूरो करहरू तिर्ने छन्।
तिनीहरू कहिले लागू हुन्छन्
यो सधैं रोकावट लागू गर्न आवश्यक हुँदैन, त्यहाँ केही केसहरू र अपवादहरू छन् जसमा नागरिकहरू र कम्पनीहरूले उनीहरूबाट छुटकारा पाउन सक्दछन् (यद्यपि पछि त्यसले यो देखाउँदछ कि उनीहरूले अधिक करहरू तिर्ने छन्)।
सामान्य मा, तपाइँले एक होल्डिंग लागू गर्नु पर्छ जब:
भुक्तान यस्तो विषय हो।
भुक्तानी राशि वा बेस होल्डिंगमा विषय भन्दा अधिक छ।
एक भुक्तानी गर्ने एक होल्डिंग एजेन्ट हो, कि एक स्वरोजगार व्यक्ति वा कम्पनी हो कि तपाइँको करहरु को लागी प्रवेश को आरोप मा हुनु पर्छ। यो विशेष गरी पेशेवरहरूले लागू गर्दछन् जसले IAE (आर्थिक गतिविधिहरूमा ट्याक्स) को दोस्रो र तेस्रो सेक्सनमा दर्ता गरेका छन्।
लाभार्थी रोक्ने विषय हो (सामान्यतया, जब तपाइँ एक कम्पनी चलानी गर्नुहुन्छ)।
रोक लगाउँदा, त्यहाँ छन् सही प्रकारले लागू गर्न सक्षम हुन तपाईंले जान्नु पर्ने धेरै प्रकारहरू। र यो यो हो कि दुबै प्रतिशत र आय हो जुन होल्डिंगबाट प्रभावित हुन्छन एक विनियमन द्वारा स्थापित गरिन्छ।
सामान्यतया, सब भन्दा साधारण रोकावटहरू हुन्:
जो कोहीसँग भाडाको घर छ उसले बनाउनु पर्छ चलानीहरूलाई रोक्ने, जबसम्म भाँडामा लिने व्यक्तिले आर्थिक गतिविधि गर्छ। यदि यो गर्दैन भने, यो अवलोकन गर्नु आवश्यक हुन्छ कि त्यहाँ वास्तवमा कुनै धारणा छैन वा यदि त्यहाँ कुनै विशेष केसहरू छन्।
पेशेवरहरू द्वारा लिइएको, यो एक हो यो तिनीहरूको उत्पादन र / वा सेवाहरूको लागि स issue्कलनका लागि जारी गरिएको इनभ्वाइसहरूमा गरिन्छ। यो पहिले वर्णन गरिएको जस्तो छ, जसमा आधारको प्रतिशत प्रतिशत कुलबाट घटाइन्छ। यस तरिकाले, उनीहरूले त्रैमासिक तिमाही तिर्नु पर्छ तिनिहरूलाई खातामा लिनु जुन उनीहरूले पहिले नै प्रत्येक चलानीमा भुक्तान गरेका छन्।
पेरोल। ट्रेन्डरीमा भुक्तानको लागि payrolls आफैले रोक्ने भाग लिन्छ। यो एक रकम हो जुन पगारबाट रोकिन्छ ताकि रोजगारदाताले त्यसलाई कामदारको खातामा भुक्तान गर्न सक्दछन्। पेरोल तयार गर्दा, कुल तलब खातामा लिइन्छ, त्यो हो, रोकिने अघि प्राप्त हुने रकम को र जसलाई ट्रेजरीमा तिर्ने रकम रोकिन्छ।
लाभांश यदि तपाईं लाभांश छ, तपाईं थाहा छ कि तपाईं पनि तिनीहरूलाई मा समात्नु पर्छ। यो दुबै सेकुरिटी र रियल इस्टेटमा गरिन्छ।
कोष, जम्मा र निश्चित आय धितो द्वारा। वा उत्पादनहरू समान छन् जुन कि, विनियमन द्वारा, पनि पतन हुनेछ जुन यो एक रकम कायम गर्न अनिवार्य छ।
मूल्य थप गरिएको कर। यो सब भन्दा राम्रो परिचित छ, विशेष गरी यसको एक्रोनिम, VAT द्वारा। सामान्यतया नियोक्ताहरूले यसलाई लागू गर्दछन् एक पटक तिनीहरूले उत्पादन वा सेवाको मूल्य दिईन्छ (वा तिनीहरूले मूल्य VAT समावेश सहित राख्छन्)। यद्यपि उनीहरूले ती सबै रकम प्राप्त गर्दैनन् किनकी यसको अंश यो ट्याक्स एजेन्सीमा प्रविष्ट गर्नु हो।
अब जब तपाई रोकिने बारे अलि बढी जान्नु भएको छ, तपाईले तिनीहरुलाई चलाउने नियमहरु अझ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईले आफ्नो बिलहरु राम्रोसँग गर्दै हुनुहुन्छ वा यदि तपाईलाई तपाईको वेतनमा राम्रो रोकिएको छ भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » के रोकिन्छ?